Umenzi webhedi yesofa
I-Baotian 35 iminyaka igxile kwifenitshala ngokwezifiso
Isakhelo sebhedi ukumkanikazi iphakanyisiwe yibhodi yentloko
Sihlalo esiNgwevu sokutya
Isofa yelinen emfusa
Isofa yaseChesterfield ene-chaise
Isofa yokuphumla enesilivere yanamhlanje emsobo
I-Spring kunye neMemori Foam Hybrid Mattress
Ifanitshala yokulala ibhedi yokugcina emnyama yesikhumba
Isitayile seAmerican isitulo sokuhlala kwigumbi elinobunewunewu befashoni yekona yekona, Ingubo yokuyilwa kweChesterfield Couch
Ifanitshala yasekhaya yale mihla 3 indawo yokuhlala ilaphu isofa
Ifanitshala yehotele ipokhethi ishedyuli yeshedyuli yeshedi
Ifanitshala yeBaothian Co., Ltd.
No.3 UChengcai Road, Idolophu enkulu, Sethue Thobisa, Isixeko saseFoshan, Guangdong. China
Iingcamango ezincinci zeGumbi lokuGcina indawo
Iflethi okanye indlu ekwicomplexInokuhlala abantu abancinci. Ngaphandle kwendawo encinci, ipaseji emxinwa, namagumbi amancinci, kusekho iindlela ezimbalwa zokwenza ukuba ibonakale ikhanya, inkulu, kwaye intle ngakumbi. Ngenxa yesithintelo esikhulu, Kufuneka siyidibanise kakuhle ifanitshala kunye noyilo lwangaphakathi, e…
Sisiphi isingqengqelo esivame ukusithenga kwigumbi lokuhlala? Impendulo ililaphu, isikhumba, okanye abanye abantu, lolukhetho lwangaphambili kwiintsapho ezininzi. Kodwa ukhe weva ukuba iisofa ezinokungena? Ewe, Kuvakala ngathi kuyothusa kwaye akuqhelekanga kubantu abaninzi. Isofa enokungeniswa inePVC, kwaye ucinezele ukungena kwerhasi emzimbeni ...
Zininzi iindidi zesofa ezahlukeneyo kangangokuba kunzima ukukhetha ukuba uza kungena kwikhaya elitsha okanye ufake enye endala. Kodwa ndiyakholelwa ukuba yenye yezona zinto zinomdla onokukhetha kuzo kumawakawaka amaqhekeza. Kungenxa yoko le nto ndithatha isigqibo sokubhala eli nqaku. Inye into endiyithandayo kukuhamba ujikeleze ifanitshala…
Ushwankathelo Umhombiso othambileyo ehotele ngumphefumlo wehotele yonke. Uyilo olulungileyo lokuhombisa okuthambileyo lunokudlala indima ekwandiseni isiphumo ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Isofa yehotele umenzi wesiko iBaotian Ifenitshala ikuxelela ngoyilo lomhombiso wehotele, Ukutshatisa nefenitshala ethambileyo. Eyokuqala kukukhethwa kwefanitshala yehotele…
Isofa yehotele isicwangciso sokuthenga
Kufuneka ukuba siye sahlala ehotele ngaphandle. Ngaba sivakalelwa kukuba isofa yahlukile kwisofa ekhayeni lethu? Ukuba ufuna ukuthenga isofa yehotele, ungayikhetha njani? Abanye abasebenzisi beenethiwekhi babuze imibuzo enjalo. Iisofa zehotele ziimveliso ezingaqhelekanga. Kwiisofa eziqhelekileyo, ayilungelanga njengemveliso yebhetshi eqhelekileyo…
Kwangelo xesha linye ukuba umgangatho wokuphila wesizwe uphuculwe kakhulu, ikwabeka iimfuno eziphezulu nangaphezulu kumgangatho wehotele kunye nenkonzo. Ke ngoko, xa ukhetha ifanitshala yehotele, Iihotele eziphambili zihlawula ngakumbi ukusebenziseka, ubuhle, intuthuzelo, iinkcukacha kunye neminye imiba, kwaye ubeke phambili iimfuno eziphezulu zeenkampani zefanitshala zehotele. Ngobugcisa bayo bokudala kunye neemveliso zefenitshala ephezulu,…
Yintoni indlela yokulala esempilweni?
Indlela yokulala esempilweni iqinisekisa ukuba ngosuku olulandelayo kugcwele amandla esp kubantu abadala abasebenzayo kunye nabafundi bomthwalo onzima. Ukulala ucoceko ngumsebenzi oqhelekileyo osinceda silale kwaye sigcine ukulala okunempilo. Ukucoceka ngokungalunganga kunokuthintela umgangatho wokulala. Kungoko abantu abaninzi bengalali kakuhle, siyathemba ukuba ezi ngcebiso zingezantsi ziluncedo ngaphambi kokuba ulale.
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye ipricelist,
nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siza kuba ngaphakathi
chukumisa ngaphakathi 24 iiyure.
Ifanitshala yeBaothian Co., Ltd. © 2020 ONKE AMALUNGELO AGCINIWE umthetho wabucalaUmthetho WOKUBUYISAInkqubo yokuhambisa
Ikhat QR khowudi x Cima